Warbixinta: Iyada oo la raacayo hawlgalinta mideysan ee Shirkadda Grid State of China, Jilin Electric Power Co., Ltd. waxay si firfircoon u dhiirrigelisaa isbeddelka shabakadda qaybinta tuulooyinka ku yaal aagga soohdinta, iyadoo gacan ka geysaneysa yareynta saboolnimada, kobcinta dadka iyo dib -u -nooleynta xadka. Iyada oo lagu saleynayo, sii wad kordhinta maalgashiga, dardargelinta hirgelinta hawsha hagaajinta shabakadda korontada ee 12 degmo oo sabool ah, dardargelinta dhisidda taageeridda tas -hiilaadka korontada ee biyo nadiif ah oo la cabbo ee miyiga, iyo siinta awood “koronto weyn” oo loogu talagalay soohdinta dadka si looga baxo saboolnimada oo ay barwaaqo noqdaan.
Waxaan ognahay in “korontada weyn” ay leedahay faa’iidooyin badan oo farsamo, sida hagaajinta isku halaynta korontada, yaraynta awoodda kaydka nidaamka, fududeynta horumarinta cutubyada waaweyn, yaraynta culeyska nidaamka ugu sarreeya, hagaajinta dhaqaalaha hawlgalka, hagaajinta tayada korontada, iyo dhammaystirka isticmaalka dhirta korontada. IWM. Tan iyo bilowgii sannadkan, iyada oo la tixraacayo go'aannadii iyo hawl -gelinta Golaha Dhexe ee Xisbiga iyo Golaha Gobolka, Grid -ka Gobolku wuxuu si adag u hirgeliyey hawlihii siyaasadeed ee muhiimka ahaa ee uu xambaarsanaa. Iyada oo ku saleysan dhammaystirka in ka badan 6,800 mashruuc sannadka 2019, waxay si xoog leh u dallacsiisay 533 “saddex gobol iyo laba degmo” iyo 282 mashruuc oo laga fuliyay tuulooyinka xuduudda ah. Dhismaha mashruuca shabakadda qaybinta waa in lagu dhammaystiraa jadwalka; si waafaqsan fikradda ah “wanaajinta shabakadda ugu weyn, xoojinta shabakadda qaybinta, iyo kor u qaadidda shabakadda miyiga”, shabakad awood miyi oo casri ah oo leh “qaab -dhismeed macquul ah, teknolojiyad horumarsan, ammaan ah, la isku halleyn karo, caqli iyo hufnaan leh” ayaa markii hore la aasaasay, iyo dhamaadka shabagga ayaa la furay "maylka ugu dambeeya".
Dhammaadka 2019, Awoodda Korontada ee Korontada Gobolka ee Jrid waxay dhammaystirtay isbeddelka iyo kor u qaadista shabakadda qaybinta ee 56 tuulo oo ku yaal aagga soohdinta ee gobolka nus sano ka hor jadwalka, waxayna xallisay yaraanta awoodda isbeddelka awoodda ee soo food saartay in ka badan 20,000 dadka ku nool deegaannada xadka iyo qalabkii hore ee korontada ee miyiga. dhibaato. Waxaa ka mid ah, 14 tuulo iyo in ka badan 5,000 oo qof ayaa gaaray yoolka "koronto fiican" oo leh awood qaybsi awood qoys oo aan ka yarayn 2 kVA iyo heerka isku halaynta korontada oo aan ka yarayn 99.80%. Sanadka 2020, Awooda Korontada ee Gobolka Grid Jilin waxay dardar gelin doontaa isbadalka iyo kor u qaadista shabakadaha korontada ee miyiga waxayna qorshaynaysaa inay dhammaystirto kor -u -qaadista korontada iyo hawlaha beddelidda 12 degmo oo sabool ah kahor dhammaadka Sebtembar. Waxaa ka mid ah, tusaale ahaan, aagga dalxiiska ee heer qaran ee heer AAAA-Guanmen Village, oo loo yaqaan "Little Huangshan Mountain ee Waqooyi-bari", waxay ku maalgelin doontaa 5.96 milyan yuan si ay u dhisto khad 2,729 mitir ah, oo ay kor u qaaddo awoodda qaybinta transformer ka 50 kVA ilaa 200 kVA. .
Sidaa darteed, iyada oo la raacayo shuruudaha “hal dammaanad, afar dadaal oo buuxa”, waa inaan dhammaan u baxnaa si aan u qabsanno hawsha yareynta saboolnimada, oo aan si firfircoon u dhisno mashaariic badbaado, mashaariic tayo sare leh, iyo mashaariic nadiif ah. Kaliya u oggolow "korantada wanaagsan" inay isticmaasho "koronto weyn" ayaa u oggolaan doonta tuulo kasta oo tuulada ka mid ah inay hesho awood, awood aamin ah, iyo deggenaansho maskaxeed, si dadku ay u yeeshaan dareen qoto dheer oo ku saabsan "Korontada Dadka ee Dadka ”, si ay si firfircoon uga qaybqaataan guusha muhiimka ah ee laga gaaray bulsho barwaaqo ah iyo la dagaalanka saboolnimada. Waxtarka Gridka Gobolka.
Waqtiga dhejinta: Jun-30-2021